» संसदको अंकगणित : ढल्दैन ओली सरकार !
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १८:०३ प्रकाशित
नेकपा एमाले अहिले आफ्नै सरकार टिकाउन भरमग्दुर प्रयासमा छ । पार्टीभित्रको माधाव नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई टिकाउन भइरहेका प्रयासको बिरोध गरेको छैन । सत्ता टिकाउन भइरहेका हरेक छलफलमा अध्यक्ष ओली निकटस्थहरु मात्रै देखिएका छन ।
पार्टीद्वारा गठित कार्यदलमा पनि नेपाल पक्षका कोही पनि छैनन । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओबादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता नलिएपनि एमालेको संस्थापन पक्ष त्यो सहकार्य थप लम्ब्याउने मूडमा देखिन्न । नेपाल समूहको मूड भनें बेग्लैछ । उनिहरु पुनः माओबादी केन्द्रसंग नै सहकार्य गर्नुपर्नेमा छन ।
तर, उनिहरुको यो मूडले निर्णायक अर्थ राख्दैन । किनकि पार्टी संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको अत्याधिक बहुमत छ । यस्तोमा ओलीको बोली अकाट्य हुनेंछ । ओलीको ईच्क्षा अनुसार नै गठवन्धन बन्नें पक्का छ । संविधानको मन्त्रिपरिषद गठन संवन्धी धारा ७६ को उपधाराहरु पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन त्यति बाधक छैनन । जुन नयाँ गठबन्धका लागि चूनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओली नै टिकिरहने संभावना ज्यादा
धारा ७६ को उपधारा पढेका र अहिलेको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेकाहरुले लख काटिसकेको अवस्था छ । घट्नाक्रमले संसदीय राजनीतिका धुरन्दर खेलाडी पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कमजोर बनाइदिएको छ । त्यो कुरो बुझ्न सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि उनले दिएका अभिव्यक्तिलाई नै लिन सकिन्छ ।
यसअघिका सदावहार किङमेकर प्रचण्डलाई नयाँ संविधान जारी भएपछि घट्नाक्रमले निरीह नै बनाइदिएको हो । उनका समर्थकहरु यो तथ्यसंग क्रुद्ध हुनु आवश्यक छैन । वर्तमानको तथ्य नै यहि हो । कांग्रेस र कम्युनिष्टका गरि प्रचण्डकै सहयोगमा आधा दर्जन बढी नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन । तर त्यो बिगत भइसकेको छ ।
वर्तमानमा उनको माओबादी केन्द्रको स्थान जनता समाजवादीले लिइसकेको छ । आजको किङमेकर महन्थ, उपेन्द्र र राजेन्द्र महतोहरु भइसकेका छन । र उनिहरुको सत्ता यात्रा पनि छिट्टै शुरु हुनेंवाला छ । संसदमा पहिलो दल एमालेका १ सय २१ र चौंथो ठूलो दल जसपाको ३४ सांसद छन । यि दुइ पार्टी मिल्दा ओलीको सत्ता त टिक्यो । टिक्यो ।
ओली इतर गठबन्धनको संभावना ज्यादै नयून
हुन त राजनीति नै संभावनाको खेल हो । यहाँ हर चिज संभव छ । जुन तपाई हामीले देख्दै अनि भोग्दै पनि आएका छौं । जस्तो कि । एमाले–माओबादी एकता । कांग्रेस–माओबादी चुनाबी गठबन्धन । संसद बिघटन अनि पुनःस्थापना । नेकपाको एकता बदर । आदि आदि । यि सबै अनुमानकै बिच भएका घट्नाक्रमहरु हुन ।
अहिले पनि ओली इतर गठबन्धनको संभावना नरहला भन्न सकिन्न । तर ज्यादै नयून । किनकि यो गठवन्धन सरकार बन्न संसदमा रहेका एमाले बाहेकका सम्पूर्ण दल मिल्नुपर्छ । त्यो बेला तीन दलले भागवण्डा गर्नुपर्छ । हैसियत अनुसारकै भाग पाइन्छ । त्यतातिर यसो नियाल्ने हो भने एमालेलाई साथ दिँदा जुन भाउ जसपाले प्राप्त गर्छ कांग्रेस–माओबादीसंग मिल्दा त्यो नपाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री पद त टाढाको कुरो । तर पनि निरपेक्ष रुपमा संभावना नै छैन भन्न पनि सकिन्न । यहाँ पनि तर कठिन छ त भन्नैपर्छ ।
बिगतदेखि नै ओलीसंग बिग्रिएको संवन्ध सुमधुर हुने अनि कट्टर आलोचकबाटै सम्पूर्ण माग पुरा गराउन पाइने यो सुवर्ण अवसर संभववतः जसपाले गुमाउने छैन । पुरा जसपा अवसर लिने मामिलामा एक नदेखिए अर्को दृश्य देखिएला । तर सरकार ओलीकै टिक्छ ।ओली इतरको सरकार बन्न एमाले बाहेकका सबै दल एक भए भने पनि असन्तुष्टहरुले पार्टी फुटाउन सक्छन । निशानामा जसपा पर्न सक्छ । २ संसदिय दल रहेको जसपा पुरानै अवस्थामा फर्केर एउटा घटकले ओलीलाई साथ दियो भनें त्यसले थप असफलता हात लाग्नेछ ।
यि सबै कुरा बुझेका जसपा नेताहरु कच्चा गठबन्धनतर्फ पक्कै लाग्ने छैनन । ल मानिलिउ ओली इतरको सरकार बन्यो रे । प्रश्न उठ्छ १२१ सिटे प्रमुख प्रतिपक्षी दलसामु उसको हालत के होला ? कतिन्जेल टिक्ला सरकार ? प्रश्न यक्ष छन ।
बदलीएको परिस्थितिबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्नुलाई अन्यथा पनि मान्न सकिन्न । ‘अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन मेरो ध्यान पुनः सभापति बन्नुमै छ’ भनेर कहीदिन अघि नै देउवाले भनिसकेका छन । उनको त्यो बोलीबाट पनि ओली इतरको गठबन्धन सरकारको संभावना औंल्याउन सकिन्छ ।
कष्णपुर रेडक्रसद्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न